Ny kiraro kanto sy ny tongotra tsara dia mila firavaka ho an'ny tongotra
Tsy tokony ho mpangalatra ny fehikibo
rantsan-tongony vava vola aminy,
Totozy hosodoko ho firavaka ho an'ny tongotra
Rehefa mandefa satroka tsara tarehy toy ny akanjo amin'ny safidy ho an'ny tongotra mangatsiaka ianao, dia mitovitovy amin'ny taona isan-taona: asehoy ny tongotrao! Ary manome toro-hevitra amin'ny firavaka sangisangy ho an'ny tongotra.
Sangisangy ho an'ny tongotra - tongotra tsara tarehy toy ny firavaka chic
Fangatahana ho an'ny tongotra
Ireo izay afaka miezaka manintona tsara sy mandoko ny tongotra ary tonga eo amin'ny paompy malemy sy malefaka, dia mazava tsara amin'ny tombony. Samy maotina sy mahasalama
Fa ny firoborobo lamaody ety an-tany dia tsy levona mihitsy amin'ny tongotra mendri-piderana sy ny tongotra miaraka amin'ny politique na ny akanjon'ny Manitu.
Fa izay tanana tsara dia marina, ny tongotra maimaim-poana: firavaka chic!
Ahoana anefa no tokony hametrahana ny firavaka ho an'ny tongotra? Ary inona no tokony hodinihina amin'io fironana be mirotsaka io?
Ny hafanana ao amin'ny fonosana masoandro dia mitazona fahatsapana amin'ny endriny rehetra. Ny kavina dia mandalo eo amin'ny kirarony ary manjelatra ny mason'ireo mpijery malala-tanana.
Raha tsy misy fiantraikany eo amin'ny dingam-pitenenana mifanaraka amin'izany, dia nanao ny zavatra rehetra ny sexy Eva. Na dia izany aza, ny sasany amin'ireo mpirotsaka voalohany tsy mieritreritra fa ny manodidina ny tendron'ny felana voaravaka dia mifandray be amin'ny fihenjanana.
Anklet ho firavaka ho an'ny tongotra
Mora hita izany: raha toa ianao ka misintona ny toe-javatra araka izay azo atao, ny ankilany dia mitombo be. Raha averinao indray ny tongotra, dia hitanao ny fahasamihafana mazava.
Ity manaraka ity: Mety tsy hikorontana ny tongotra iray na dia mafy loatra aza ny tongotra. Ary izany dia midika fa ny halavan'ny fantsom-batana dia tsy maintsy faritana amin'ny faritry ny ankilany amin'ny tranga faratampony. Raha tsy izany, dia ho lasa raokom-bava haingana ilay fitaovana.
Ny taovam-pandaminana tsara tarehy dia toy ny lamaody an-dalam-pandrosoana toy ny rantsantanana manihina. Nefa manao fangatahana hafa amin'ny firavaka izy ireo satria tsy azo ampitahaina amin'ny toe-javatra rehetra ny fepetra anatomika.
Noho izany antony izany dia ny lanjan'ny tariby mitovitovy habe dia azo ekena indrindra ho an'ny tongotra. Ankoatr'izay dia tokony hokarakaraina mba hahazoana antoka fa tsy misy rantsana sy teboka maranitra na fanamaivanana goavana ny famolavolan'ny peratra. Satria ity dia mitrandraka mety hiteraka korontana ara-bakiteny izay mety hitranga.
Sangisangy ho an'ny tongotra izay tsy maina ary mijanona mandritra ny fahavaratra? Tsy misy olana amin'ny tatoazy izay tsy maharitra. Indray mandeha indray, eto ny tànan'ny papa. Izay liana amin'io endrika fanatsarana ny tongotra io dia tokony ho google ho an'i Mehndi. Satria i Henna dia manana azy eo amin'ny faritra misy tongotra!
Ny tongotra tsara, ny firavaka tsirairay dia tsara foana. Tsy mampaninona na vita amin'ny loko volamena, volafotsy na zavamaniry izany. Misy foana ny zavatra mitranga.
Lendre - Ny lamaody miafina
Fomba fanatanjahan-tena ho an'ny fianakaviana
Ny fitaovana manan-danja indrindra ho an'ny ankohonany
Famerenana - hevitra ho an'ny trano
Fairy tale lyrics Brothers Grimm - The Bremen ...
Ny lahatsoratr'i Hans Christian Andersen - Ny ...